ဒီဂျေဟောက်စ် ရဲ့ Seamanship စာအုပ် ~ MSU Portal
6/24/2012 03:12:00 AM Navi Kyaw2comments
ဒီဂျေဟောက်စ် ရဲ့ Seamanship စာအုပ်ပါ...
အပြင်မှာတစ်အုပ်ကို တစ်သောင်းလောက် ပေးရပါတယ်...
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်းအပြင်မှာမဝယ်ဘူး... Online ကပဲ ဒေါင်းပါတယ် :)
အားလုံးအတွက်ပြန် share ပေးတာပါ...
ဒေါင်းဖို့ ဒီမှာ click နှိပ်ပါ
hlaing pyae says:
June 24, 2012 at 9:57 AM Reply
ငါတင်ပေးမလို့ကို မင်းက ရှေ့က ဦးသွားပြီ ။ ဟီး ။ great bro , appriciate that . i will also upload some softwares and ebooks for MSU , ok .see ya . hp .
June 25, 2012 at 8:40 AM Reply